Olee otú Tinye Lyrics ka Music on Mac
> Resource> Video> Olee otú iji Tinye Lyrics ka MP3 on Mac
Lyrics ka MP3 bụ ihe mmiri na-azụ. The lyrics dị oké mkpa ka anyị na-awagharị na music ụwa n'enweghị furu efu. The lyrics egosipụta mmetụta na-akọwa na ụwa mara mma okwu, nke nwere ike n'isi ruo mgbe ebighị ebi. Ọbụna nye ndị na-agbalị ịmụta asụsụ ọhụrụ, ha nwere ike na-ahọrọ na-ege ntị songs ma na-amụ lyrics maka mma na ya pụta.
Nsogbu bụ lyrics-bụghị mgbe niile n'ebe ruru ọtụtụ ihe. Ka ihe atụ, lyrics ka MP3 song bụ adịghị na internet, ma ọ bụ na ihe ọkpụkpọ ebe gị egwu na-akpọ apụghị tinye lyrics ka MP3-akpaghị aka. Echegbula ọ bụla ọzọ, Wondershare TidyMyMusic maka Mac nwere ike inyere ogbe download lyrics maka gị niile music kwukwara na usoro. Akpa download a usoro iji nweta ya arụnyere na mgbe ahụ na-eso anyị na-ego ndị dị mfe nzọụkwụ n'okpuru.
1 Tinye songs ka TidyMyMusic maka Mac
Ọ bụrụ na ị nwere iTunes na kọmputa gị, TidyMyMusic ga-akpaghị aka iṅomi iTunes n'ọbá akwụkwọ ma na-egwu niile kwukwara na idozi iTunes taabụ.
Maka mpaghara faịlụ MP3, ị nwere ike ozugbo ịdọrọ faịlụ ka dobe na idozi Music taabụ ebe ị nwekwara ike pịa Open File bọtịnụ na họrọ songs.
2 Tinye lyrics ka songs
Chetara onye MP3 faịlụ na-ahụ otu ihe Chọpụta bọtịnụ na ala ziri ezi. Pịa bọtịnụ, mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-amalite ibudata lyrics si internet. Tinyere ụzọ, ID3 ọmụma banyere song na album artwork ga-kwukwara.
Cheta na: Iji merie a otutu songs, gị na mkpa iji họrọ niile music na pịa Chọpụta Họrọ na mgbe ahụ na-eche maka ọrụ niile a ga-eme. Ma ọ bụ na ị dị nnọọ pịa iṅomi button n'elu mgbe niile ọmụma ga-achọ na akụkụ mbụ nke na ahụ ọkwa.
Mgbe nchọgharị usoro bụ n'elu na ihe ọmụma nile na-egosi, pịa Mee ịzọpụta niile ozi. Mgbe ahụ, gị MP3 faịlụ bụ zuru ezu na ihe niile nkọwa.
3 Dezie ozi banyere music (nhọrọ)
Ọzọ fancy atụmatụ nke a usoro bụ na ọ na-enye gị ohere dezie ozi dị ka kwa gị mmasị. Pịa akara ngosi na-acha uhie uhie gosikwa igbe dị n'okpuru ebe na ụdị ọ bụla okwu. Na i nwekwara ike ịdọrọ a foto site na mpaghara gị nchekwa na-album artwork.
Ụda ịtụnanya, ọ bụghị ya? E wezụga niile na ọrụ gosiri n'elu, ọ na-nwere isi ọrụ dị ka egwu na-akpọ music site abụọ-ịpị. Chọrọ ego ya ugbu a? Aga n'ihu ma na ọ ga-ada gị.
Olee otú Download Last.fm Music na Last.fm Music Downloader
Olee otú iji tọghata MP4 ka MPEG
Olee otú Play DivX on Xbox One
DivX Editor: Olee dezie Your DivX Files na Windows na Mac
Olee otú Play AVI on Xbox One